Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dalka dibu ugu soo laabtay.
Mogadishu Isniin 6 August 2012 SMC
Muqdisho, August, 06, 2012------Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib shir uu uga qeyb galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaa oo ay isugu yimaadeen Saxiixayaasha Roadmap-ka. Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigii la socday ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cadde, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen Wasiiro, Xildhibaano,Saraakiil, Ururada Haweenka, Dhalinyaro, Fanaaniin iyo shacab kale oo aad u farabadan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa marka uu soo degay kadib saxaafadda kula hadlay gudaha garoonka diyaaradda ee Aadan Cadde International Airport, Isagoona Sharaxaad kooban ka bixiyay Shirkii uu ku soo qaatay magaalada Nairobi iyo wixii looga hadlay.
“Marka hore waxaan la kulaney Xoghayaha Arrimaha dibadda Mareykanka ee Clinton waxeyna aad noogu mahadcelisay sida aan u meel mariney Hashiiskii Raodmap-ka, sidoo kale waxey noo sheegtay in dowladda Mareykanka ay mar waliba taageerayaan Shacabka Soomaaliyeed, waxeyna soo dhaweysay oo ay dowladda Soomaaliya u amaantay sameynta Dastuurka dalka. Waxaana inta badan ka wada hadalney Arrimaha Soomaaliya, Wuxuuna wada hadalkeenii noogu idlaaday si guul ah”.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in kulankii Saxiixayaasha ee Nairobi uu ku soo dhamaaday mid guul ah islamarkaana tilmaamay in ay sii wadayaan lagu hormarinayo Soomaaliya.